के हो एनआइसी र बैंकर्स संघ विवाद ? अन्तर बैक कारोवार रोकिदा कस्तो असर पर्छ ? « Pariwartan Khabar
काठमाडौं । एनआइसी एसिया बैंकले शुक्रबारदेखि बचत र मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि बैंकबीच विवाद चर्केको छ ।
एनआइसीले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपमा १२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेपछि अन्य बैंकले यो धेरै भएको भन्दै विवाद झिकेका हुन् ।
बैंकहरुबीच बचत खातामा ८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा ब्याज नबढाउने भद्र सहमति भएको थियो । एनआइसीले ब्याजदर बढाएपछि सहमति तोडेको भन्दै ऊसँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने निर्णय बैंकर्स संघमा आवद्ध २७ बैंकले गरेका छन् ।
बैंकहरुबीच बचत खातामा ८ प्रतिशत र मुद्दती खातामा ११ प्रतिशतभन्दा ब्याज नबढाउने भद्र सहमति भएको थियो। एनआइसीले ब्याजदर बढाएपछि सहमति तोडेको भन्दै ऊसँग कुनै पनि कारोबार नगर्ने निर्णय बैंकर्स संघले गरेको छ।
यता एनआइसी बैंकले भने ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्नु गलत भएको बताउँदै यसले खुला बजार नीतिको उपहास गर्ने र ‘बैंकर्स संघको निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेको छ ।
बैंकहरुको नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने बजारले नै ब्याजदर तोक्ने हुनाले र यो बैंकहरुको आपसी विषय भएकोले यस विषयमा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ ।
यस प्रकरण पछि बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको वर्षौंदेखिको कार्टेलिङ छरपष्ट भएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले चालेको कदमलाई बैंकर्स संघको कार्टेलिङविरुद्धको लडाईका रुपमा धेरैले बुझेका छन् ।
तर अहिलेको अवस्थामा एनआईसीले आफुसँग पर्याप्त मात्र नगद रकम राखेको छ भने अन्तर बैंक कारोवार रोकिदा बैंकलाई खासै ठुलो समस्या पर्देन ।
३० चैत्र २०७६, काठमाडौं चालू वर्ष नेपालको आर्थिक बृद्धिदर १.५ प्रतिशतमा सीमित हुन सक्ने विश्व